Uzizwa usekhaya ngeMicra entsha
INISSAN Micra entsha
MCEBO MPUNGOSE | November 22, 2019
NGESIKHATHI abakwaNissan bethula iMicra entsha nyakenye, kube nedumela ‘ngokukhula’ kwale moto nobuhle bomzimba besizukulwane sakamuva samaMicra.
Lokhu kungenze ngazibuza ukuthi kazi basiphatheleni kulokhu abakwaNissan kwazise ngayibona iphelele le moto.
Kulokhu abaguqulanga okuningi kodwa bathayisele kwiMicra ngokuyiqinisa ngezinhlobo ezintsha ezintathu okuyi-Acenta Plus, Tekna, neTekna Plus.
Lezi zimoto ziqukethe injini kaphethroli entsha engu-1.0 litre ekhiqiza amandla awu-84 kW. Eyaphambilini ibikhiqiza kuphela * -66kW wamandla kodwa kuhle ukuqaphela ukuthi ifike kowamanqamu emncintiswaneni iAutoTrader South African Car of the Year ngonyaka odlule.
Injini yayo entsha, iDIGP-T (Direct Injection Gasoline) inobuchwepheshe bakamuva bezinjini okuyenza ishayeleke kangcono emgwaqweni ngaphandle kokudedela amakhemikhali eCO2 (Carbon Dioxide) amaningi angcolisa umoya. Kuzokhumbuleka ukuthi abakhiqizi abaningi bezimoto esikhathini sanamhlanje basembhidlangweni wokwehlisa izimoto ezikhiqiza iCO2 ephezulu njengoba kunomthelela omubi emvelweni.
Ngaphandle kwenjini abakwaNissan bayehlisile i-suspension yale moto ukuze iwabambe kangcono amakhona kanti futhi iqukethe igiya le-manual eligcina ku-6, okuyenza iphefumule kahle emgwaqweni onguthelawayela.
Ngesikhathi siyivivinya kwaqapheleka ukuthi imnandi emgwaqweni kanti futhi nangaphakathi intofontofo. Kuyabonakala ukuthi ababeyihlela babefuna ukuqinisekisa ukuthi abangaphakathi bazizwa besekhaya.
Isikhathi esiningi abantu uma bethenga izimoto ezingenasinqe noma ezincane bavamise ukuzishuna ngaphakathi ngokufaka umsindo ongcono.
Izindaba ezimnandi kubathandi beMicra ngukuthi entsha iphuma iqukethe iBose Personal Sound Syste, enezipikha esihlalweni endaweni oncikisa kuyo ikhanda, ezicabheni, dashboard ne-amplifier ngaphansi kwesihlalo.
Umsindo ngaphakathi uyakwazi ukuwuhlela ngendlela oyithandayo kwi-screen esiphuma ne-Android Auto ne-Apple Carplay. Into engangichazanga nje ikhamera yokuhlehla engemuva okuvela kwi-screen ukuthi ayikho sezingeni eliphezulu.
Kobunye ubuchwepheshe obuqukethwe yile moto singabala i-Intellingent Around View Monitor, Object Detecting kanye ne-Blind Spot Warning.
Abakwa-Nissan baphinde bakha i-App yale moto, iNissan Carcade etholakalayo ku-Apple Store naku-Google Play.
Ngale-App ukwazi ukubona le moto ukuthi ibukeka kanjani ngaphakathi nangaphandle, ngobuchwepheshe be-Virtual Reality. Kwi-App uyakwazi nokubhalisela ukuzwa iMicra entsha nge-test drive kanti uyakwazi nokuthola neminye imininingwane ngayo.
Lokhu kuzwakala kuyinto encane kodwa bathe le-App yakhiwe eNingizimu Afrika futhi izosetshenziswa abakuleli okwamanje njengoba isazothuthukiswa.
Njengoba isakhona iMicra ka-66kW ethulwe eminyakeni emibili edlule, abantu basangakwazi ukuthola lolu hlobo lwemoto, ethe ukushibha kancane uma iqhathaniswa neMicra yakamuva.